शिंह कसरी बन्यो देवीको प्रिय बाहन… ! पुरा पढी सेयर गर्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
शिंह कसरी बन्यो देवीको प्रिय बाहन… ! पुरा पढी सेयर गर्नुहोस !
August 26, 2020 177
शिव संग क्रुद्ध हुदा शुरू भएको कहानी : त्यसो त देवीको कयौ स्‍वरूप छन, तर मूल रूपले सबै माता पार्वतीका नै विभिन्‍न रूप या अंश हुन, उहि माता पार्वती जो शिव जी कि पत्‍नी हुन। एक पटक भगवान शंकरले उनलाई मजाकमा काली भनिदिए त्यसले माता पार्वति रुष्‍ट भैइन किनभने उनलाइ लाग्यो शिव उनको वर्णको मजाक बनाईरहेका छन। रिसाएर उनि वनमा गहन तप गर्न गैइन। त्यहि स्‍थानमा एक भोकाएको शिंह पनि थियो जसलाई भोजनको आवश्यकता थियो।
पार्वतीको गर्न खोज्यो शिकार
भोकले व्‍याकुल बनेको शिंहले जब तपस्‍यारत पार्वतीलाइ देख्यो तब उसले सोच्योकि उ उनको शिकार गरेर आफ्नो भोख शांत गर्नेछ। उ पार्वती जी को तप पूर्ण भएको पर्खाईमा बस्यो ताकि उनको शिकार गर्न सकोस। यो तपस्‍या कयौ वर्ष सम्म चल्यो र सिंह पनि एक तरिकाले तपस्‍या रत भएर त्यहि बसिरह्यो।
प्रसन्‍न भए शिव पार्वती
पार्वतीको तपस्‍या बाट भगवान शिव अत्‍यंत प्रसन्‍न भए र वहां प्रकट भएर उनलाई गौर वर्णको आर्शिवाद पनि दिए । जलमा स्‍नान गरेर गोरि हुनु भएकि पार्वती जब जान तयार भैइन तब उनले शिंहलाई देखिन र प्रतीक्षाको पनि उनलाई ज्ञान भयो। पार्वती जी ले यस प्रतीक्षालाई एक कठिन प्रतीक्षाको दर्जा दीइन र शिंह देखिन अत्‍यंत प्रसन्‍न भैइन। भनिन्छ कि त्यसबेला देखिन पार्वतीले उसलाई आफ्नो वाहन बन्ने आर्शिवाद दिनुभयो र दुर्गाको रूपमा शिंह उनको प्रिय वाहन बन्यो।
Prevकुलमान घिसिङलाइ हटाउन पैसाको बिटो बोकेर रातारात मन्त्रालय धाउने को हुन् ?नामै तोकेर बोले पुण्य गौतमले ! (भिडियो सहित)
Nextबुधवार यी १० उपायहरू गर्नुहोस्, इच्छा पूरा हुनेछ !!!
खुशिको खबर भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ने, टिकट काट्ने बेलामै होटलको खर्च तिर्नुपर्ने,
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई करोड १८ लाख
एक म’जदुरलाई रा’तारात करो’डपति बनायो दुईवटा ढुं’गाले…
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29413)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27964)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27753)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24469)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (21979)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20814)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15542)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14873)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13553)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13253)
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता,धन लाभ हुने यी १० संकेत…